မန္တလေးမြို့မှာ ယနေ့ညပိုင်းက ပြုလုပ်နေတဲ့ လျှပ်စစ်မီး ပုံမှန်ရရှိရေး ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြထုတ်ဖော်ပွဲ... ~ ဒီမိုဝေယံ
မန္တလေးမြို့မှာ ယနေ့ညပိုင်းက ပြုလုပ်နေတဲ့ လျှပ်စစ်မီး ပုံမှန်ရရှိရေး ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြထုတ်ဖော်ပွဲ...
မန္တလေး စွမ်းဟိုတယ်ရှေ့မှ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး ငြိမ်းချမ်းစွာ ထုတ်ဖော် ဆန္ဒပြပွဲ။ ရွှေမရှိလျှင် နေလို့ရသည်..။ (မီး=ရေ) မရှိလျှင် နေလို့မရပါတဲ့
လျှပ်စစ်တိုင်းရုံးရှေ့ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒဖော်ထုတ်နေသည့် ပြည်သူများ (Mandalay Voice)
ဓာတ်ပုံ သတင်း Kyaw Moe Win၊ ကိုသုကာ၊ CJ Myanmar (Facebook)
ယနေ့ (၂၀၊ ၅၊ ၂၀၁၂) တနင်္ဂနွေ ည ၇ နာရီကျော်ခန့်ကစတင်၍ လူအင်အား တစ်ရာကျော်ရှိသော မန္တလေးပြည်သူပြည်သားများက မန်းတိုင်းဒေသကြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း အင်ဂျင်နီယာရုံးအား ပတ်၍ လျှပ်စစ်မီး ပုံမှန်ရရှိရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်း ဆန္ဒထုတ်ဖော် စီတန်းလမ်းလျှောက်ပွဲ ကျင်းပနေစဉ်
မန္တလေး၊ စွမ်းဟိုတယ်ရှေ့တွင်လည်း ယခု စီတန်းလမ်းလျှောက်ပွဲနှင့် တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဖယောင်းတိုင် မီးထွန်းပွဲ ပြုလုပ်လျက်ရှိပြီး ဆန္ဒပြ ၂ ဖွဲ့ ပူးပေါင်းမည်ဟု သိရသည်။
(အဘဒီမို) (Update News) ယခုအချိန်ထိ လူအင်အား ၅၀၀ ကျော် ပူးပေါင်းပါဝင်လာပါတယ်.... ၇၇ လမ်း ၂၆×၂၇ ကြားမှာပါ... ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ယူနီဖောင်းနဲ့ စောင့်ရှောက် ပေးပါတယ်.. အားလုံး အေးအေးချမ်းချမ်း ရှိနေပါတယ်.... လူအင်အား ပိုများလာနေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှုန်း ကျဆင်း
Facebook မှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ ရောင်စုံကာတွန်းများ (၉ အောက်တိုဘာလ ၂၀၁၈)
အင်တာနက်ပေါ်မှာ ခြိမ်းခြောက်ခံရရင် ဘာတွေလုပ်ရမလဲ
အခုတစ်လော Viber ကနေ ခြိမ်းခြောက်စာပို့တာတို့၊ Facebook ကနေ ခြိမ်းခြောက်စာပို့တာတို့ ရှိလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ E-mail (သို့မဟုတ် G-...
မနက်ဖြန်ကျင်းပမယ့် U-12 Junior Soccer World Challenge 2014 ပြိုင်ပွဲမှာ Tokyo U-12 လက်ရွေးစဉ်အဖြစ် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကစားမယ့် မြန်မာနိုင်ငံသား မောင်ကောင်းဇံမရ..
မနက်ဖြန်ကျင်းပမယ့် U-12 Junior Soccer World Challenge 2014 ပြိုင်ပွဲမှာ Tokyo U-12 လက်ရွေးစဉ်အဖြစ် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကစားမယ်...
စစ်တပ်အင်အားကြီးလေ တိုင်းနိုင်ငံ ကျဆုံးရလေ... ...ဆောင်းပါးရှင် ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်
စစ်တပ်အင်အားကြီးလေ တိုင်းနိုင်ငံ ကျဆုံးရလေ.. . . ..ဆောင်းပါးရှင် ဒေါက်တာလှိုင်မြင့် ဘုရင့်နောင်မင်းတရားကြီး..( ၁၅၅၁ - ၁၅၈၁ ) ...
စစ်သား..တစ်သန်း တိုးချဲ့မယ့်ဆိုတဲ့ ပါတီ ကိစ္စ အပိုင်း(၁) ... ဒေါင်းတုလို့ ဖွတ်ခုန် ဖင်ကွဲရုံပဲရှိမယ် (ဆောင်းပါးရှင် ဒေါက်တာလှိုင်မြင့်)
တနေ့က MRTV မှာတင်ထားတဲ့ အမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီလား အမျိုးသားကျွန်ယက် ပါတီလားတော့မသိ အာဏာရှင်ဆန်ဆန် ဗိုလ်သန်းရွှေကို ကျေးဇူးအမွှန်းတင် ပြောဆို...
The New York Time သတင်းစာမှာ ဂုဏ်ပြုဖော်ပြခံရပြီး ရန်ကုန်ရဲ့ ဟီးရိုး သို့မဟုတ် ရပ်၊ သွားဆိုတဲ့ အာဏာတခုကို ခရီးသွား ပြည်သူက ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ခံယူတဲ့ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကောင်း ယာဉ်ထိန်းရဲ ကိုခင်မြင့်မောင်အား ပြည်သူထဲမှ ပြည်သူ တယောက်အနေဖြင့် လေးစား ဂုဏ်ပြု အပ်ပါသည်။
The New York Time သတင်းစာမှာ ဂုဏ်ပြုဖော်ပြခံရပြီး ရန်ကုန်ရဲ့ ဟီးရိုး သို့မဟုတ် ရပ်၊ သွားဆိုတဲ့ အာဏာတခုကို ခရီးသွား ပြည်သူက ကြည်ကြည်ဖြ...
ဗိုလ်ချုပ် နှစ်တရာပြည့် အတွက် Caricature နဲ့ ပုံဖော်ဂုဏ်ပြုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ အဆို အမိန့်များ(အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ)
ဗိုလ်ချုပ် နှစ်တရာပြည့် အတွက် Caricature နဲ့ ပုံဖော်ဂုဏ်ပြုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ အဆို အမိန့်မျာ...
U-12 Junior Soccer World Challenge 2014 ပြိုင်ပွဲဝင် မြန်မာနိုင်ငံသား မောင်ကောင်းဇံမရ ပါဝင်သည့် Tokyo U-12 အသင်း ဒုတိယဆုရရှိ..
မောင်ကောင်းဇံမရ ဘာစီလိုးနား တိုက်စစ်မှူးနှင့် တဦးချင်းတွေ့ပြီး အပိုင် ကန်သွင်းခွင့်ရသည့် အပိုင်ဂိုးကို ကာကွယ်စဉ် U-12 Jun...
အိမ်ခြံ၊ မြေ၊ တိုက်ခန်းရှာသူများအတွက် အကောင်း ဆုံး Smartphone Apps..
အိမ်ခြံ၊ မြေ၊ တိုက်ခန်းရှာသူများအတွက် အကောင်း ဆုံး Smartphone Apps သမာရိုးကျ စနစ်ဖြစ်တဲ့ သတင်းစာနဲ့ အေးဂျင့်များမှ တဆင့် အိမ်၊ခြ...
ယနေ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ ကျင်းပါတဲ့ Wor...
ထိုင်းသတင်းဋ္ဌာနများမှ ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ ယနေ့မဟာချိုင...
ယနေ့ ထိုင်းနိုင်ငံ မဟာချိုင်သို့ ရောက်ရှိလာတဲ့ လူထ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထိုင်းနိုင်ငံ သ...
သမ္မတနှစ်ယောက်နဲ့တိုင်းပြည် (ကဗျာရှင် နေရဲနီ)
ယနေ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၂၄နှစ်တာ ...
သမ္မတအကြံပေး ဦးဖယောင်းလှိုင်သို့ (ဆောင်းပါးရှင် မေ...
ရွှေသမင်ဘယ်ကထွက် မင်းကြီးတာကလား ရွှေလီရေအားလျှပ်စစ် ...
ယနေ့ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းနေတဲ့ကြားက မြောက်ဥက္ကလာ...
၂၇ရက်နေ့ညက ပုသိမ်၊ ဆူးလေ၊ မြောက်ဥက္ကလာပနဲ့ တောင်ဒဂံ...
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားမိသားစုများ အကျိုးဆောင်ကွန်ယက်...
ပဲခူးမြို့မှ တရားသူကြီး ဦးအောင်ဖုန်းဝင်း၏ ဇနီးဒေါ်...
မြ၀တီမြို့တွင် လျှပ်စစ်မီး တစ်ယူနစ် (၆ . ၅)ဘတ်အထိ ...
ယနေ့ည တာမွေမှာ ပြုလုပ်တဲ့ ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်း ဆန္ဒ...
ခွင့်သာခိုက်မှာ ဂွင်မရိုက်စေချင်ပါ.. (နောက်ဆက်တွဲ)...
စောင်းသံခါးခါး (ကဗျာရှင် နေပြည်တော်သား)
တောင်ဒဂုံ လေးဒေါင့်ကန် စံပြရပ်ကွက်ရှိ ၀မ်းလျှော ၀မ...
တကောင်းတောင် နီကယ် စီမံကိန်းမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရယူ...
ရေရှားပါစပြုလာပြီဖြစ်တဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မှော်...
စစ်ကိုင်းမြို့မှ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး ဖယောင်းတိုင်ထွ...
အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်းနဲ့ သမ္မတအကြံပေး...
တောကြီးမျက်မည်းအတွင်းမှ လျှပ်စစ်မီးတွေ ထိန်ထိန်ညီး...
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံများစာရ...
မြွေပွေးပိုးထိ (ကဗျာရှင် နေရဲနီ)
ယနေ့ ရန်ကုန်မြို့ ဆူးလေစေတီတော်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ (၂၄)...
MRTV က ည(၈)နာရီ သတင်းမှာ ဒီလို ကြေငြာသွားပါတယ်တဲ့....
မန္တလေးမြို့ (၂၄)နာရီ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး ကော်မတီ "...
လျှပ်စစ်မီး ပိုမိုရရှိရေး ရန်ကုန်တွင် ဖယောင်းတိုင်...
မန္တလေးမြို့သူ မြို့သားများရဲ့ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး ခ...
ယနေ့ မုံရွာမြို့ (လျှပ်စစ်ရုံး)ရှေ့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ ...
လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေးအတွက် အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့ အမှတ်(၁) ...
NLD-BG ပညာဒါနကျောင်းမှာ ပြုလုပ်တဲ့ သွေးနှင့် ကျန်း...
အမှတ်(၂)ဘိလပ်မြေစက်ရုံ ဝန်ထမ်းများမှ စစ်ထောက်ချုပ်...
မန္တလေးမြို့မှာ ယနေ့ညပိုင်းက ပြုလုပ်နေတဲ့ လျှပ်စစ်မ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ရွေးကောက်ခံ လွှတ်တေ...
မြိတ်မြို့ လွှတ်တော်အမတ် ယုဇနဦးဋ္ဌေးမြင့်မှ ပြင်ဆင်...
ဘယ်ကောင်စီစီ (“လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးဦး...
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ အရေးပေါ်အတွက် ပေးဆပ်မှုမျ...
အစိုးရ စစ်တပ်မှ အုပ်စုဖွဲ့ အဓမ္မပြုကျင့်ပြီး ရိုက်န...
အခွင့်သာမယ့် အခိုက်အတန့်ကို စောင့်မျှော်လျှက်ပါ.. ...
(၅)နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးအား မတရားပြုကျင့်ခဲ့သည့် အမှု...
အခွင့်သာခိုက်မှာ ဂွင်မရိုက်စေချင်ပါ.. (ပေးစာ)
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ရွှေဘိုမြို့န...
နော်ေ၀၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း၏ အမေ့အိမ် ခရီးစဉ်....
"အမေစုကို ဖတ်ကြည့်ခြင်း" ကဗျာရှင် ကြီးမြင့်(ရေဦး...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးမျ...
ပြည်တွင်းမှာ မြန်မာတွေ အလုပ်ရနိုင်ဖို့အရေး (ဆောင်...
လှိုင်းသက်သံ (ကဗျာရှင် ဥာဏ်သဏ်းတဏ် "ရေဦး")
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တောင်ကိုးရ...
ဒီလို မြင်ကွင်းမျိုးတွေ နောင်မဖြစ်ရလေအောင် သက်ဆိုင...
NLD-BG၏ လူမှု အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ...
တောင်ကိုးရီးယား သမ္မတLee Myung-bak ရဲ့ မြန်မာပြည်ခရ...
လူမှုရေးအလုပ်နဲ့ ကံတူအကျိူးပေး... (ဆောင်းပါးရှင် ဒေ...
ဂျပန်နိုင်ငံ (JICA)အဖွဲ့၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ အမျိုးသား...
ဘုန်းနှင့်ကံနှင့် သဇင်နီ (ကဗျာရှင် နေရဲနီ)
မြွေပွေးခါးပိုက် ပိုက် (ကဗျာရှင် နေရဲနီ)
NLD-BGနှင့် လမ်းပေါ်ကအမှိုက်ကောက် ကလေးငယ်များ...
၁၉၈၃ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၉ရက်နေ့က မြောက်ကိုရီးယားတွေ...
ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် ရွေးကောက်ပွဲ အုပ်ချုပ်ရေး...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ညီလာခံ ကျင်းပရေး ဗဟိ...
ယနေ့ ဘဘဦးတင်ဦးနဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု...
ဂျာမဏီနိုင်ငံသို့ အလည်အပတ် ရောက်ရှိနေသော ပြည်သူ့လွှ...
၂၀၁၂ ဧပြီလ(၁၈)ရက်က တရုတ် (CPI) ကုမ္ပဏီရဲ့ မြစ်ဆုံဆ...
သမိုင်းဝင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မိန့်ခွန်း ဓာတ်ပြာ...
အများပြည်သူအတွက် အများပြည်သူ ကောင်းမှု... နာရေးကူည...
ပြည်တွင်းမှ သောက်သုံးရေ၊ အခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ မြ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုင်ငံကူးလက်မ...
၂၀၁၂ခုနှစ် (မတ်လ ၂၃ရက်)နေ့က အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်ဝန်ကြီ...
ပြည်တွင်းက Sky Netရုပ်သံလိုင်းနဲ့ စပါးလုံးသတင်း တခ...
(၈)နှစ်သမီး ဒုတိယတန်းကျောင်းသူ မေသင်္ကြန်အား မုဒိမ်း...
အမေနှင့် လောကဓံ (ကဗျာရှင် နေရဲနီ)
ပခုက္ကူ မြန်မာ့မီးရထား ကွန်ကရိ ဇလီဖာတုံးစက်ရုံမှ အလ...
ရေကြည်ချမ်းမြေ့တပေါက် သောက်ပါရစေလေ... (ရန်ကုန်မြို...
N LD-BG ပညာဒါနကျောင်း အတွက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ပညာရေးကွန်ရက် ရန်ပံ...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂျပန်နိုင်ငံသိ...
မေလ(၂)ရက်နေ့မှာ ထူးထူးခြားခြား ရန်ကုန်မှာ ပိတောက်ေ...
ယနေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ကျမ်းသစ္စာကျိမ်ဆိုခဲ့တဲ့ အမျ...
ယနေ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ ကျမ်းသစ္စာ ကျိမ်ဆိုခဲ့တဲ့ အ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပညာရေးကွန်ရက်၏ စုရင်...
ပေးစာ၊ တိုင်ကြားစာ (၅စောင်)
ပါဝါ(၅၄) (ကဗျာရှင် နေရဲနီ)
အဖွဲ့အစည်းနှင့် တရားရေးပူးပေါင်းပြီး နိုင်ငံသားတစ်...
NLD (BG) သွေးအကူအညီပေးရေး အဖွဲ့၏ လူမှုရေးလုပ်ငန်းမျ...